Shicilela uLuhlu lweeRetail zakho kwi-Intanethi kunye neMilo | Martech Zone
Kwiveki ephelileyo bendithetha noRob Eroh, oqhuba imveliso kunye namaqela obunjineli e Milo. UMilo yinjini yokukhangela yokuthenga edityaniswe ngqo kwindawo yokuthengisa (i-POS) yomthengisi okanye ukuCwangciswa kwezixhobo zeShishini (ERP). Oku kuvumela uMilo ukuba abe yeyona injini yokukhangela ichanekileyo xa kufikwa kumba wokuchonga izinto ezikwindawo yakho. Injongo kaMilo kukuba unayo yonke imveliso kwishelufa nganye kuwo onke amabali kwiwebhu… Kunye nokunciphisa ukuntsokotha kokuthenga kwi-Intanethi nangaphandle kweintanethi. Benza umsebenzi omhle kakade!
Inkampani incinci ineminyaka engama-2.5 ubudala kodwa sele benabathengisi abangaphezulu kwe-140 abaneendawo ezingama-50,000 XNUMX ngaphesheya kweUnited States kwaye bongeza ngaphezulu yonke imihla. Yinkqubo elula ebonelela ngenkonzo entle kakhulu. UMilo uhlasela imarike enkulu… abathengi abayifunayo ngoku kwaye abafuni ukulinda ukuhanjiswa (njengam!). Akukho nto ikhathaza njengokubonisa ivenkile kwaye kufuneka baphume kuluhlu ... ke uMilo uyikhathalele loo nto. Nanku umzekelo wokukhangela endiwenzele iiTV zeTV ezikwi-Indianapolis:
Isitshixo sempumelelo kaMilo kukuba bathathe iinzame zokudityaniswa… enyanisweni, basungule iMilo Fetch, inkonzo ye-beta kunye nokudityaniswa kwe-Intuit QuickBooks Point of Sale, Intuit Quickbooks Pro, Microsoft Dynamics Retail Management System, Retail Ipro kunye neComcash Point yokuThengisa.
Uluhlu lweMilo sele lukhona nge I-RedLaser, usetyenziso olusimahla lokuskena kwi-iPhone kunye ne-Android. IMilo sele ikho kwi-Android. Kwaye ngo-2012 iMilo idityaniswa nezinye ii -apps ze-eBay. Ngaphandle kokukhangela nje, iMilo ikwavavanya amanqaku okuphuma, nawo. Khawufane ucinge ukuba… khangela into, uyithenge, kwaye uphume uye evenkileni enayo esitokisini ngekona!
Ukuba ungumthengisi, fumana uluhlu lwakho lwe-Intanethi okwangoku nge Milo.
tags: Indawo yokuthengisa yeComcashebayIntuit Indawo ekhawulezayo yokuThengisaIntuit Quickbooks Proukukhangela indawo yokuthengaInkqubo yokuLawulwa kweRetail yeMicrosoft Dynamicsmiloukulanda imiloInkqubo yokuThengisa
Mar 21, 2012 ngo-4: 26 AM
Doug, oku kundikhumbuza kancinane kaZaarly kunye nentanda yam, TaskRabbit.